Revenue drops by K1.2 billion due to the COVID-19 pandemic | Myanmar Business Today
Home Business Revenue drops by K1.2 billion due to the COVID-19 pandemic
Revenue drops by K1.2 billion due to the COVID-19 pandemic
The COVID-19 pandemic has blighted all the businesses across the world, and Myanmar’s economy is no exception from it. The country revenue as of June 12 has dropped by K1.2 billion compared to the same period last year.
The country collected K4,278 billion as of June 12 this fiscal year while the total revenue last year was over K4,279 billion.
“The revenue before the COVID-19 pandemic was around K500 million higher than that of the same period last year. However, we are now seeing steady drops since the beginning of the COVID-19. It is mainly because almost all businesses halted due to the pandemic, and partly because the government lowers the tax,” U Min Htut, Director General of the Internal Revenue Department, said.
On June 12, the president of Myanmar signed the ordinance to provideanon-refundable credit tax credit for salary increment, new employment, or purchase of new equipment to stimulate businesses.
In the Economic Relief Plan issued on April 28, the government planned to provide tax/fees deferral or waiver and tax credits.
Daw Aung San Suu Kyi, the state counselor of Myanmar, emphasized that the significance of COVID-19 induced tax revenue shortfalls cannot be downplayed, with anticipated revenue underperformance requiring reallocations of government spending to create space for COVID-19-related outlays, and policies.
“However, such reallocations shall not come at the expense of hard-fought-for fundamental social and economic freedoms now enjoyed in Myanmar. Nor shall our nation’s economic response involves cutting down our social services or increasing taxes on labor and investment,” she added.
The country is inabudget deficit for years. President U Win Myint at the meeting of the National Finance Commission, which he chaired, forecasted that the 2019-2020 fiscal year’s budget deficit to be as high as K7 trillion as the government prepares to spend more to fulfill more of the urgent needs.
With the lower revenue, the country’s budget deficit is set to get even higher.
COVID-19 ကပ်ရောဂါသည် တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ရိုက်ခတ်မှုရှိပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာလည်း အဆိုပါ ရိုက်ခတ်မှုမှ မကင်းလွတ်ခဲ့ပေ။ ဇွန်လ ၁၂ ရက်အထိ သိရှိရသော ကိန်းဂဏန်းများအရ အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံ ရရှိမှုမှာ ယခင်နှစ် ကာလတူနှင့် ယှဥ်လျှင် ကျပ် ၁ဒသမ၂ ဘီလီယံ လျော့ကျခဲ့သည်။
ယခုဘဏ္ဍာနှစ် အစမှ ဇွန်လ ၁၂ ရက်အထိ ၄၂၇၈ ဘီလီယံ ကောက်ခံ ရရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကာလတူတွင် ကျပ် ၄၂၇၉ ဘီလီယံကျော် ကောက်ခံရရှိခဲ့သည်။
“COVID-19 မတိုင်ခင်တုန်းက အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုဟာ အရင်နှစ်ကာလတူထက် ကျပ် သန်းငါးရာကျော်လောက် များခဲ့ပေမဲ့ COVID-19 ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာပြီး အနုတ်လက္ခဏာပြလာတယ်။ အဓိကကတော့ ကပ်ရောဂါကြောင့် လုပ်ငန်းတွေရပ်သွားတာကြောင့်ပဲ။ နောက် အစိုးရက အခွန်တွေ ဖြေလျှော့ပေးတာကြောင့်လည်းပါတယ်” ဟု ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းထွဋ်က ပြောသည်။
လစာတိုးပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်ခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းကရိယာဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက် ပြန်အမ်းငွေ အခွန်ခုနှိမ်ခွင့်ပေးသည့် ဥပဒေကဲ့သို့သော အာဏာတည်သည့်အမိန့်ကို ဇွန်လ ၁၂ ရက်တွင် သမ္မတက လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဧပြီ ၂၈ ရက်က ထုတ်ပြန်သည့် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုသက်သာရေး စီမံချက်တွင် အစိုးရက အခွန်/အခကြေးငွေ ပေးဆော်ငရမှုကို ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်း၊ အခွန်ဆိုင်ရာပြန်အမ်းငွေပေးမည့်အစီအမံများကို ထည့်သွင်းထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လျော့နည်းသွားမည့် အခွန်ပမာဏများပြားမှုကို လျှော့တွက်၍မရနိုင်ကြောင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့် အခွန်ငွေပမာဏကို မရရှိနိုင်သောကြောင့် ကပ်ရောဂါနှင့် ဆက်စပ်သော ငွေကြေး အရင်းအနှီးနှင့် မူဝါဒဖော်ဆောင်ရေးတို့အတွက် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေများ ပြန်လည် ခွဲဝေလွှဲပြောင်း သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
“သို့သော် ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရာမှာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်င့မှာ ရရှိထားတဲ့ အခြေခခံ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုတွေကို မထိခိုက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဖြတ်တောက်တာတွေ လုပ်သွားမှာ မဟုတ်သလို အလုပ်သမားတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပေါ် ကောက်ခံတဲ့ အခွန်အခတွေကိုလည်း တိုးမြှင့်ကောက်ခံတာတွေ လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်စဥ် ဘဏ္ဍာရေးလိုငွေပြနေပြီး သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူလိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ငွေကြေး ပိုမိုသုံးစွဲသွားရန် စီစဥ်ထားသောကြောင့် ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ကျပ် ၇ ထရီလီယံ ရှိနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
ယခုကဲ့သို့ အခွန်ကောက်ခံရရှိမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် နိုင်ငံ၏ ဘတ်ဂျက်လိုငွေမှာ ပိုမိုများပြားလာဖွယ်ရှိနေသည်။
Previous articleFishery export surges by $100 million despite COVID-19
Next articleImpeachment fails; Yangon Cheif’s position remains unchallenged